Monday, April 5, 2021 Tọzdee, Eprel 8, 2021 Douglas Karr
Ntọala mkpado, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, bụ ihe kachasị mkpa na ibe ahụ mgbe a bịara n'ịkọwapụta ọdịnaya gị nke ọma maka usoro ọchụchọ ị na-achọ ka achọta. Na maka ịhụnanya nke ihe niile bụ SEO… Biko melite aha obibi ulo gi site na Home. M na-atụ ụjọ oge ọ bụla m hụrụ saịtị ebe ha anaghị ebuli aha peeji nke! Na-asọ mpi na nde ibe ndị ọzọ a na-akpọ Home!
Ọ bụrụ na ị nọ na WordPress, ngwaọrụ dị ka Ọkwa Math SEO ngwa mgbakwunye -ekwe ka ị hazie ma gị post aha na gị na peeji nke aha. Ha abụọ dị iche. Site na saịtị WordPress, aha ntinye aha bu ihe di n'ime ederede ederede, ebe aha akwukwo gi bu aha mkpado nke a na-ejide site na engines ọchụchọ. Na-enweghị WordPress SEO ngwa mgbakwunye, ha abụọ nwere ike ịbụ otu. Nchịkọta Math SEO ngwa mgbakwunye na-enye gị ohere ịkọwapụta… ka ị nwee ike iji isiokwu na-akpali akpali na aha dị ogologo n'ime ibe - mana ka na-egbochi mkpado aha peeji ahụ na ogologo kwesịrị ekwesị. Nwere ike ịhụ nhụchalụ nke ya na ịgụta agwa:
60% nke nyocha Google na-eme ugbu a site na mkpanaka ya mere Math na-enyekwa nlele mkpanaka (bọtịnụ aka nri n'elu aka nri):
Ngọnarị: Ana m eji njikọ njikọ m maka SEMrush n'elu.
Aha njirimara bụ meta element kachasị mkpa ma bụrụ ogo ogo. Ọtụtụ weebụsaịtị na-emehie nke imefusị ohere a naanị site na iji aha ụlọ ọrụ. Ọ kwesịrị iji isiokwu kọwaa ihe dị na ibe.
Nov 1, 2012 na 1:21 AM
egwu post na zuru ezu… N'ọdịnihu, nke a nwere ike zoro aka dị ka Bible nke Mbụ Optimization! Ịkụ aka ..
Nov 1, 2012 na 1:38 AM
Obi ekele dị ukwuu @wiseStep!
Achọghị m ịnọgide na m blog aha mgbe m na peeji nke aha ma m na-amaghị otú e si eme ya. M na-eji All In One Seo Pack ngwa mgbakwunye na m wepụrụ% blog_title% nke bụ mgbe% page_title%, ugbu a ọ bụ% page_title%. Ma ọ ka na-aga n'ihu. Na header.php aha koodu bu, na peeji.php aha bu. Kedu ihe m ga - eme, yabụ aha blog agaghị aga n'ihu mgbe aha peeji gachara.
M ga-eji ezi obi mbupụ ntọala gị site na All In One SEO Pack Plugin ma wụnye Yoast SEO Ntinye maka WordPress. Can nwere ike mbubata ntọala ebe ahụ na ihe ị nwere n'elu kwesịrị ịrụ ọrụ.